ငြိမ်းဝေ: May 2008
သေခြင်းကတော့ ပင်လယ်ကြီးပေါ့ ”
“ ဂျော့မားရစ်” ရဲ့ ကဗျာ
ကြေကွဲစွာ ရွတ်ဆိုမိပေါ့ ။
ပင်လယ်ကိုရှာမတွေ့တဲ့ မြစ်တစင်းလား” ပေါ့။
ထင်ရှားတဲ့ “ကွေ့မှာ ခူးဆွတ်ကြခြင်း” *
“ဂျော့မားရစ်” ရဲ့ တင်စားချက်
ခက်ရာ ခက်ဆစ် ထုဆစ်ရတဲ့ မြစ်တွေပါပဲ။
မြစ်တွေ သိန်းချီသန်းချီပြီး ကွေ့ချလိုက်ရ
ရာစုနှစ် ဆယ်စုမက အတွင်း
ခြေရာအထင်းဆုံး ကွေ့ကြီး တကွေ့။
ဒီကွေ့ကို ဒီကွေ့က ဖန်တီးတာလား
လပ္ပတ္တာ၊ ကျုံမငေး၊ ကွမ်းခြံကုန်းက ဖန်းတီးတာလား
လှူဘွယ်ဝတ္တု အကူပစ္စည်းတွေက ဖန်တီးတာလား
ကူပါ ကယ်ပါ တစာစာက ဖန်တီးတာလား
ရုပ်ရှင်မင်းသား ကျော်သူ၊ ဇာဂနာ၊ ငှက်ပျော်ကြော်တို့က ဖန်တီးတာလား။
ဠင်းတကြီးတကောင် လပ္ပတ္တာမြို့ထိပ်မှာ လာနားသွားတယ်။
သော့ခလောက်သံ တချွင်ချွင် အရင်ရောက်လာတယ်။
တယောက်လည်မြို တယောက်နင်းဖို့ ချောင်းနေကြတယ်။
အလှူရှင်တွေ ပုဆိုးခြုံပြီးမှ လာခဲ့ရတယ်
ဆားငန်ရေ တခါဝင်ရုံနဲ့ လယ်တွေမပျက်နိုင်ဘူး
နံ့သာရေ ဖြန်းထားတဲ့ အပုတ်နံ့လှိုင်တယ်
စစ်တပ်ကြီး ဗိုက်၀၀စားဖို့ အခွင့်ထူးတွေရသွားနိုင်တယ်။
ဘုရားသခင်က ပန်းသီးကို ဖန်တီး
နေရောင်ခြည်မရတဲ့ ဘက်မှာသီးတဲ့ ပန်းသီးတွေဖြစ်ခဲ့ပေါ့
ဘုရားသခင်က ပျားရည်ရသူကို ဖန်တီး
မာန်နတ်က ရေငတ်သူကို ဖန်တီး
“ ရှဟေ ရာဇဒီ” **အတွက် ပုံပြင်သစ်တပုဒ်ဖန်တီး။
ပြည့်ပြီးမှ ဆုတ်သွားတဲ့ လရောင်ကိုမျှော်ကြ
ငြိမ်သက်သွားတဲ့ စစ်မျက်နှာရယ်လို့ မရှိဘူး
တကိုယ်လုံး လောင်မြိုက်နေတဲ့ မြစ်ကြီး
တကိုယ်လုံး စင်းကောဖြစ်နေတဲ့ ခေတ်ကြီး
လက်အုပ်ချီ ကန်တော့ခံပြီ ကြေကွဲပြသတဲ့
(၉၂) ရာခိုင်နှုန်းကျော်နဲ့ ကြေကွဲပြသတဲ့
ဘက်မညီတဲ့ စစ်ကို တိုက်ခဲ့ကြရပြီ။
သင့်ကို ငါတို့ ထမ်းခဲ့ပြီ။
သင့်ကို ငါတို့ ဆွတ်ခူးလိုက်ကြပြီ
မောင်းသံ တဟီးဟီး။ ။
၁၊ ၆၊ ၀၈
* “ကွေ့မှာခူးဆွတ်ကြခြင်း” ကိုခါး (ကွမ်းခြံကုန်း) ရဲ့ ကဗျာခေါင်းစီးဖြစ်ပါတယ်။
** “ ရှဟေရာဇဒီ” တထောင့်တညပုံပြင်များကို ပြောသူမိဖုရား
Posted by ငြိမ်းဝေ at 4:46 AM2comments: Links to this post
ကျနော်ဟာ နိုင်ငံခြားဘာသာတခုဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာမှာ ကျွမ်းဝင်နှံ့စပ်သူမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ်ကဗျာတွေနဲ့ တခြားဘာသာကနေ အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ကဗျာတွေကို လိုက်လံဖတ်ရှုရာမှာတော့ ၀ါသနာထုံသူဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၇၃ခုနှစ်ထဲမှာ မိတ်ဆွေကဗျာဆရာတဦးဖြစ်တဲ့ “စန်းမောင်” (ယခု တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ ဦးစန်းမောင်၊ ပဲခူး) နဲ့အတူတွဲပြီး၊ အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ထားတဲ့ တရုတ်ကဗျာတပုဒ်ကို အဲ့ဒီ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ကတဆင့် မြန်မာလို ဘာသာပြန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကဗျာရဲ့အမည်က “ကွမ်ဆီပြည်နယ်ထဲက ပြောက်ကျားများ” ဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းကဗျာဆရာက တချိန်တုန်းက တရုတ်ပြည်ရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ “မာရှယ်ချင်ရီ” ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ “ကွမ်ဆီ ပြည်နယ်ထဲက ပြောက်ကျားများ” ကဗျာရှည်ကို တရုတ်နိုင်ငံခြားဘာသာ ထုတ်ဝေရေးဌာနက အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ထုတ်ဝေတဲ့ တရုတ်စာပေမဂ္ဂဇင်းတခုမှာ တွေ့ခဲ့ကြတာပါ။ ဒီကဗျာကို မိုးဝေစာပေမဂ္ဂဇင်းမှာ ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွေ့အကြုံဟာ ကျနော့်ရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော ဘာသာပြန်အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောင်အခါ ကျနော်လက်လှမ်းမီတဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ ကဗျာတချို့ကို ဘာသာပြန်တဲ့အခါ ဘာသာဗေဒတံတိုင်းကို လွတ်အောင်မကျော်နိုင်လို့ တပုဒ်လုံးဆုံးအောင် ဘာသာမပြန်နိုင်ခဲ့တာနဲ့၊ မှားပြီး ဘာသာပြန်ခဲ့တာမျိုးတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို တောနင်းတောင်နင်း အဖြစ်မျိုးကြုံရတဲ့အခါ မိတ်ဆွေ ကဗျာဆရာ “ကိုစန်းမောင်” ပြောပြခဲ့တဲ့ စကားတခွန်းက ကျနော့်အတွက် အားဆေးတခွက်ပါပဲ။ သူက “ဘာသာပြန်တဲ့အလုပ်ကို ရဲရဲသာလုပ်စမ်းပါ။ ပထမတော့ ဘာသာပြန်မမှားအောင် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားရမှာပေါ့ အဲ ... မှားပြီးဘာသာပြန်မိရင်လဲ နားလည်တဲ့သူတွေက ထောက်ပြလိမ့်မယ်။ ဘာသာပြန်နိုင်တဲ့သူတွေက တတ်ရဲ့သားနဲ့ ဘာသာမပြန်ပဲ နေတာနဲ့စာရင် မတတ်တတတ်နဲ့ ကြိုးစားပြီး ဘာသာပြန်နေတဲ့လူက ပိုပြီးတာ ၀န်ကျေတာပေါ့။ မင်းဘာမှ အားမငယ်နဲ့။ ဆက်သာလုပ် ” ဆိုတဲ့ စကားကို ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒီအားဆေးကို မှီဝဲရင်း နိုင်ငံရပ်ခြားကဗျာတချို့ကို ကျနော် ဘာသာပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနှစ် စက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်းမှာ “ချင်းတွင်းမဂ္ဂဇင်း”ကို ကျနော်ဖတ်တဲ့အခါ ဆရာ“မြင့်သန်း” ရဲ့ “လရောင်နှင့် လီပို”လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရပါတယ်။ “လီပို” လို့ တွေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ကျနော့်မှာ ခြေတွေလက်တွေ အေးစက်သွားလုမတတ် ရင်ခုန်နေမိပါတယ်။ “လီပို”ဆိုတဲ့ တရုတ်ကဗျာဆရာက ကျနော် အင်မတန် နှစ်သက်တဲ့ ကဗျာဆရာတဦးပဲ။ သူ့ကဗျာတပုဒ်ကို ကျနော် ဘာသာပြန်ခဲ့ဖူးတာပဲ။ ဒါနဲ့ပဲ စာအုပ်ဆိုင်ထဲမှာတင် မတ်တပ်ရပ်ရင်း “ဆရာမြင့်သန်း”ရဲ့ ဆောင်းပါးကို ဆုံးအောင်ဖတ်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ “လီပို”ရဲ့ ကဗျာတပုဒ်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်မူရင်းနဲ့တွဲပြီး၊ မြန်မာဘာသာပြန်ပေးထားတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဆရာမြင့်သန်းဘာသာပြန်ထားတဲ့ ကဗျာက ကျနော်ဘာသာပြန်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာနဲ့ တပုဒ်တည်းဖြစ်နေတာသွားတွေ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ “ငါ ... ဘာသာပြန်ထားတာနဲ့၊ တူမှတူရဲ့လား၊ ငါ ... ဘာတွေများ မှားပြီး ဘာသာပြန်ခဲ့မိပါလိမ့်” ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ အဲ့ဒီ ကဗျာ ဘာသာပြန်ကို သုံးလေးကြိမ် ဖတ်ပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်နေလို့ အိမ်ကို ချက်ချင်းပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ကဗျာနဲ့ ဆရာမြင့်သန်းဘာသာပြန်ထားတဲ့ကဗျာကို တဖက်စီချပြီး တိုက်ဆိုင်ကြည့်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာတော့ ကျနော့်မှာ ဘာသာပြန်ကဗျာနှစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းက မူရင်းကဗျာဆရာ “လီပို”အတွက် ကြေကွဲရပါတော့တယ်။
အောက်မှာ ဆရာမြင့်သန်းဘာသာပြန်ထားတဲ့ ကဗျာကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်မူရင်းနဲ့အတူ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဘာသာပဲ သောက်နေတယ်၊ ဒီတုံးခွက်ကို
မြှောက်လိုက်ပြီး လမင်းကြီးကို ငါနဲ့အတူသောက်ပါလားလို့
မေးလိုက်တယ်၊ လအရိပ် ငါ့အရိပ်တွေ
ခွက်ပေါ်မှာ ရောင်ပြန်ဟပ်တယ်၊ တို့သုံးဦးသားပဲပေါ့၊
သူတို့ကိုပဲ ငါ အဖေါ်လုပ်ရတယ်။
အပေါင်းရယ် အသင်းရယ်နဲ့ ပျော်မှာပဲ
ငါ နဲ့ လိုက်ဆိုနေသလိုပဲ၊ ငါ ထ က တော့
အရိပ်က ငါနဲ့ လိုက် က တယ်၊ ငါ မမူးသေးခင်
လမင်းကြီးနဲ့ င့ါအရိပ်ကို သူငယ်ချင်းတွေပဲလို့
သဘောထားလိုက်ပြီး ၀မ်းသာမိတယ်၊ ဒါပေတဲ့
ကွဲကွာသွားကြရော ဒီလို ခံစားချက်မရှိတဲ့
သူငယ်ချင်းတွေကို ငါအမြဲအားကိုးနိုင်တယ်၊ တနေ့
နဂါးငွေ့တန်းကြီးရဲ့ အတွင်းဖက် တနေရာမှာ
တို့သုံးယောက်သား ပြန်ဆုံကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်။ ။
but use these two for campany;
dances along with me, while
we these will meet again,
(မူရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆရာရဲ့ အမည်ကိုတော့ ဆောင်းပါးထဲမှာ မပါရှိပါ။)
နောက်ထပ်ပြီးတော့ “ရွှေဒေါင်းတောင်” မဂ္ဂဇင်းမှာ ကျနော်ဘာသာပြန်ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ ကဗျာနဲ့ မူရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ကဗျာကိုလည်း ထပ်ပြီး ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ နှိုင်းယှဉ် ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အဖေါ်မပါပဲ ငါတယောက်ထဲ ၀ိုင်သောက်နေတယ်။
လမင်းရယ် ငါရယ် ငါ့အရိပ်ရယ်
၀ိုင်ကို ဘယ်လိုသောက်ရမယ်ဆိုတာ မသိရှာ
ငါ့အရိပ်ကတော့ ငါ့ကို လိုက်တုတယ်
ငါ က လိုက်တော့
And soon enough it will be Spring
I sing - the moon moves to and fro.
I dance - my shadow leaps and sways.
Drunk - and we'll go our separate ways.
အခုလိုဘာသာပြန်မူကွဲနှစ်ခုကို တင်ပြခဲ့ခြင်းဟာ ဆရာမြင့်သန်းရဲ့ ဘာသာပြန်စွမ်းရည်နဲ့ ကျနော့်ရဲ့ ဘာသာပြန်စွမ်းရည်ကို ယှဉ်ပြိုင်လိုတဲ့သဘောနဲ့ စာဖတ်သူများရဲ့ရှေ့မှာ အစစ်ဆေးခံဖို့ ရည်ရွယ်ရင်းမဟုတ်တဲ့ အကြောင်း အလေးအနက်ထားပြီး အစီရင်ခံပါရစေ။ ကျနော့်ရည်ရွယ်ချက်က ကဗျာတပုဒ်တည်းကို လူနှစ်ယောက်က ဘာသာပြန်တဲ့အခါ ကဗျာတပုဒ်ကနေ နှစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားရတဲ့ကိစ္စ ရှင်းလင်းတင်ပြချင်လို့ အခုလို ယှဉ်တွဲပြီး ဖေါ်ပြခဲ့တာပါ။ ဒီလို အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ကဗျာတပုဒ်ကို မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုတဲ့အခါ မူရင်း တရုတ်ဘာသာကနေပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ပြန်ဆိုခဲ့ကြတဲ့ စာပေပညာရှင်များအနေနဲ့ မူရင်းတရုတ်ကဗျာအပေါ်မှာ အဓိပ္ပါယ်အယူအကောက်မတူခဲ့ကြရာက စပြီး၊ မတူတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် ကဗျာနှစ်ပုဒ် ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ ဒီလိုမတူကွဲပြားနေတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ကဗျာနှစ်ပုဒ်ကိုမှ ကျနော်နဲ့ ဆရာ မြင့်သန်းတို့က ထပ်ပြီး မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုလိုက်တော့ တခါထပ်ပြီး မတူကွဲပြားတဲ့ ကဗျာနှစ်ပုဒ် ဖြစ်လာရပြန်တော့တာပေါ့။ ဒီလို တသီတတန်းကြီး ထိုင်ပြီးတွေးမိတဲ့အခါ မူရင်းကဗျာဆရာ “လီပို” သာ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေမယ်ဆိုရင် သူ့ကဗျာကို ပုံပန်း ပျက်အောင်လုပ်မိတဲ့ ကျနော်တို့အပေါ် (ဒီနေရာမှာ ဆရာမြင့်သန်းအပေါ် မလေးမစားနဲ့ ရည်ရွယ်ပြောဆိုလိုရင်း မရှိကြောင်း ကြားညှပ်ပြီး ပြောပါရစေ။) ဘယ်လိုများ သဘောထားမလဲ ... ။ ဒီလိုတွေးတဲ့အခါ ကျနော့်မှာ နေစရာမရှိလောက်အောင် တုန်လှုပ်ကြေကွဲ ရပါတော့တယ်။
ဒီလို ဘာသာဗေဒ အဟန့်အတားနဲ့ အကောက်အယူ အဟန့်အတားကြောင့်ပဲ၊ “ကဗျာကို ဘာသာပြန်ရင် ပျက်တော့တာပဲ” လို့ ပြောကြဆိုကြတာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ တချို့ကဆိုရင် “ကဗျာကို ဘာသာပြန်လို့ မရနိုင်ဘူး” လို့တောင်မှ ပြောကြပါတယ်။ ဘာသာပြန်အလုပ်ကို လုပ်မယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာနှစ်ခုစလုံး ကျွမ်းကျင်ဖို့ လိုတယ်လို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ခက်တာက ကျနော်က ဒါတွေကို မသိမဟုတ်ပါဘူး။ သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရပ်ခြားကဗျာတွေကို ကျနော်က မဖတ်ပဲ မနေနိုင်ဘူးလေ။ ဖတ်ပြီးရင်လည်း တခြား ကိုယ့်လို ကဗျာချစ်တဲ့သူတွေဆီ လက်ဆင့်ကမ်း ဖောက်သည်ချပေးချင်တဲ့စိတ်က တားလို့ကို မရပါဘူး။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ လက်တဆစ်နဲ့ပဲ အထပ်ထပ်အခါခါ ဘာသာပြန်လေ့ကျင့်နေခဲ့မိတာပါပဲ။ ဒါနဲ့ပဲ ပညာရှင်များရဲ့ အဆိုအမိန့်တွေကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး၊ ကဗျာတချို့ကို ဘာသာပြန်ခဲ့မိတာပါ။ ကဗျာတွေကို ရူးသွပ်မိတဲ့စိတ်နဲ့ ဘာသာပြန်ဆိုတဲ့အခါ ဘာသာပြန် အမှား၊ အကောက်အယူ အမှားတွေကြောင့် ကဗျာတချို့ ချို့ယွင်းသွားကြတဲ့အခါ မူရင်းကဗျာဆရာတွေအတွက် ကြေကွဲရင်နာမိပေမယ့် ကျနော့်ရဲ့ စိတ်စေတနာကို သဘောပေါက်ပြီး ခွင့်လွှတ်နိုင်ကောင်းရဲ့လို့တော့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ကျနော်ကတော့ ကျနော်နှစ်သက်တဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားကဗျာတချို့ကို မျက်ကန်းတစ္ဆေ မကြောက်ရှေ့ဆက်ပြီး ဘာသာပြန်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေမိအုန်းမှာပဲလို့ ထင်မိပါတယ်။ တကယ်တော့ ကဗျာတွေကို ဘာသာပြန်ဆိုတဲ့အလုပ်ဟာ ကျနော့်အဖို့ ရူးသွပ် ကြေကွဲရတဲ့ အလုပ်တခုလို့ပဲ ဆိုကြပါစို့။ ။
ကိုးကား။ ။ ချင်းတွင်းမဂ္ဂဇင်း၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၀၆
( ဒီဆောင်းပါးဟာ ၆ ၊ ၉ ၊ ၂၀၀၆ ခုတုန်းက ခေတ်ပြိုင်အွန်လိုင်းမှ ရေးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။)
Posted by ငြိမ်းဝေ at 7:12 AM No comments: Links to this post
( နာဂစ် လေမုန်တိုင်း အပေါ်မူတည်ပြီး ရေးဖွဲ့ကြတဲ့ ကဗျာတချို့ကို ကျနော်နှစ်သက်လို့ ကျနော့်ရဲ့ဘလော့ဂ်မှာ တဆင့်ကူးယူဖော်ပြသွားချင်ပါတယ်။ ဒီကဗျာကတော့ မိုးမခ မီဒီယာအွန်လိုင်းမှာတင်ထားတဲ့ ဆရာဝင်းပေါ်မောင်ရဲ့ ကဗျာဖြစ်ပါတယ်။ )
မိုးစပါး နွေးစပါး, သားငါးတွေ ဖွေရှာလို့
ပြည်မြန်မာကို ငါတို့ ကျွေးမွေးနေတာပါ။
နာဂစ် တကယ်ကြမ်းမယ်မှန်း သိရင်
ခုတော့ ငုတ်တုတ်ကြီး လည်စင်းခံရတာ
ဧရာဝတီရယ်… ငါတို့ကို ခွင့်လွှတ်ပါ။
ငါတို့ ဘိုးဘွားတွေ ထားခဲ့တဲ့
ပုထိုး, ဘုရား, လယ်, ရွာ, အင်းတွေ
ခုချက်ချင်း ငါတို့ မျက်စိအောက်မှာ
ပုံပြင်အသစ်တွေ ပြောကြရမယ့် အဖြစ်
နာဂစ်က ဒဏ္ဍာရီထဲ အဓမ္မ ဆွဲချ
နအဖက စစ်ကျွန်ဘ၀ထဲ အဓမ္မ ဆွဲချ
သေမင်းလက်က ရုန်းထွက်ခဲ့ရ ပြီးတောင်မှ
ကူညီမဲ့ဘ၀ထဲ တခါ ပြန်ဆွဲချနေကြ။
နို့တိုက်မယ့် အမေလဲ မရှိ
နို့စို့မယ့် သားလဲ မရှိ
အဖေလို့ ခေါ်မယ့်သူလဲ မရှိ
သမီးလို့ ခေါ်မယ့်သူလဲ မရှိ
ချက်စရာ ဆန်လဲ မရှိ
ထမင်းစားမယ့် သူလဲ မရှိ
နဂိုတည်းက မရှိတဲ့ ဘ၀တွေထဲ
အဖော်အပေါင်း နိုင်ငံတွေ ရှိသေးရဲ့
အမိဧရာ နှလုံးလဲ ဆတ်ဆတ်ခါ နာလှပေါ့
ဒါနဲ့တောင် နှလုံးသား မရှိသူတွေက
ဘာမှ မဖြစ်သလို စတိုင်ထုတ်ပြီး
စစ်မီးပုံထဲ ထိုးချဖို့ သူတို့ ကြိုးစားနေလေရဲ့။
ငါတို့အတွက် သမိုင်း ဖြစ်လိမ့်မယ်။
အလုံးစုံ ပျက်သုဉ်းရေးမှာ နိဂုံးချုပ်လိမ့်မယ်။ ။
မေ၊ ၁၁၊ ၂၀၀၈
(ဒီကဗျာဟာ မိုးမခမီဒီယာအွန်လိုင်းမှာ တင်ထားတဲ့ ကဗျာပါ။ ကျနော်နှစ်သက်လို့ တဆင့်ကူးယူဖော်ပြလိုက်တာပါ။)
Posted by ငြိမ်းဝေ at 6:28 AM No comments: Links to this post
၁၉၉၃ - ခုနှစ်ထဲမှာ
တပ်မဟာ (၁) နယ်မြေလို့ခေါ်တဲ့
ဖါးအံ၊ ဖါပွန်၊ ကျိုက်ထို၊ သထုံမြို့နယ်တွေဆီ
ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ (DVB) ရဲ့ ကွင်းဆင်းသတင်းထောက်အဖြစ်နဲ့ သွားခဲ့ရတာပါ။
“ပဉ္စလက်တောင်တန်း” ကဗျာရှည်တပုဒ်ကို ရေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါကို ... ချစ်မိတ်ဆွေ ကဗျာဆရာ “ယောဟန်အောင်” က
“ဗေါ်ဒလယ်” ရဲ့ ငရဲပန်းများကိုမြင်လိုက်ရ
တစ တစ နီးကပ်လာခဲ့။
“၀ိုင်းယက်” ရဲ့ ပန်းချီကားလို
အဲဒီမှာ ဂျူးဗန်းရဲ့ “ကာလယန္တယား”
ဒန်အိုးဒန်ခွက် ကြက်၊ ၀က်၊ ဘဲနဲ့
ထမိန် အင်္ကျီများကို သယ်ဆောင်ကာ
“ဘီသိုဗင်” ရဲ့ သုခုမပိုး
ငါ့ နှလုံးသားထက် ဆူးခက်ချဆွဲ။
ငါ့ လက်ထဲမှာ ... ။
“မော်ပါဆွန်း” ရဲ့ လရောင်ည။
“ဒီမိုကရေစီ ဒေါ်မကြည်” ကိုတွေ့ရတယ်။
သင့်ဦးခေါင်းမှာ စကားဝါပန်း ဆင်မြန်းထားတာ
သမီးငယ်တပါး ဆိုတာ ငါသိတယ်။
ဘိုးဘွားတွေရဲ့ သင်္ချိုင်း မြေဆိုတာ
ကဗျာ ... ... ... ။
“မရေသူ” ရဲ့ ငိုရှိုက်သံဟာ
ပါးရိုက်ခံရတဲ့ သူကြီးမ “ဒေါ်စောမြိုင်” ဟာ
“ကျုံစိန်” ရွာထိပ်က သစ်ပင်
“နော်အောလာ” အရှေ့ဖက်က လယ်ကွင်းပြင်
ဘယ်သူငြင်းမလည်းလို့ မေးစမ်းအုန်းပ။ ။
၁၈၊ ၂၊ ၁၉၉၃
ခေတ္တ - သထုံခရိုင်
(A Traveler's Epic)
An early bird,
Pushes open the shut-doors of the world
With her songs,
Along the rays ofanew day’s sunlight.
At the top of the rock,
Where I hid and slept last night,
Sunlight showers gracefully and willowy,
With the color of stark blood-- oozing out all over the mountains.
I watch the morning and
See it as an affable poem.
I observe and sense jasmine,
In the sound of cattle-bells,
Which rise to me from the bottom of the mountain.
I wonder where the foot-path of the Salween starts and ends,
Amidst the dirty-white smog,
Hovering along the blue mountain ranges.
I see the hell-flowers of Baudelaire ,
In the fire which sprouted from volcanoes,
Located on the other side of the world.
Which are beautiful like fire and
Burst loud in the silent night,
And then the injured spirits of his poem,
Fly wildly towards me.
How long has the “Mee-Seng mountain”
Pretended to be fast asleep?
He, eventually, has ascended from the floor of the ocean and,
He, eventually, has rid himself of dirty mud,
He, eventually, has gulped many springs of sweet water.
He, eventually, has ceased the toil of some and allowed them to rest on his shore and
He, eventually, has conceived people in his womb.
Now he, the Mee-Seng mountain, has becomeahistoric symbol of
Magnificent mother nature, the beauty parlor of the world.
From afar he is seen as beautiful,
But draw closer, and he creates fear.
Then when I touch him,
When I drink his water,
Like our blood is inaswamp together,
Which makes us near to each other.
Now I am dangling from his neck and singingasong.
Now I am picking flowers from his scalp.
Now I am sleeping on his palm.
When I stand on his forehead,
The forests below look like small shrubs to me.
The landscape far below Mee-Seng mountain,
Spreads flat and horizontal likeapainting of "Wyette".
Then I borrow and ride the vehicle from Jules Verne,
To travel, yearning for the future.
The devils flew and jumped down,
To the green coconut forest, located far below.
Then I sense the odor of blood
From the hostile forces’ camp,
Located on the opposite side of the Don-tha-mi river.
Sometimes, I see
The hostile forces,
In the brush at the bottom of the mountain.
The hostile forces are pig-tailing the extremes of the Mee-Seng and
Slide to the bottom of Mee-Seng.
They came back to Mee-Seng, bringing pots and pans, livestock, and clothing,
Whatever they had robbed from the villagers.
The hostile forces shared
The stolen property,
Under the shade of banana-forest at the bottom of Mee-Seng,
Where, with heart-ache, I watched almost daily.
Then they go back to their barracks,
Arrogantly and proudly.
A silent night in the Kyone-Sein forest-reserve,
Where temporary sleeping-beds and
The rest of rice-pestle-bowls are scattered,
Along the small stream,
Where there are the essentials forawar-torn people’s subsistence living.
There are lonely hills,
Bald and dried by slash-and-burn farms,
Likeascalp losing its scattered hairs.
I heardamandolin’s melody,
In the midst of vast forest,
It felt likeaking’s luxury.
Though it awaked my aesthetic inkling,
With Beethoven's beating heart,
Itching and tickling my innards,
Like thorns gripping and dragging my heart.
On the ridge of Baw-tha-byu,
On the ridge of Ka-maw-ka-seng,
The whirlwind comes like hopping rabbits,
Singing along like flowers' scents,
Hardly identified by me.
Prohibition orders from the army,
“Do not wear your hair long,
do not growabeard,
do not dangle your Longyi on your shoulder. ”
Where in this particular area and
The flyer with strange orders
Came to my hand
I see the falling leaves of Inn ,
Nobody dares to pick them up now,
They are red on top and red underneath,
Turning the entire mountain range intoared beacon.
I, dehydrated by the weather
Drank water fromasmall pond,
Its circumferenceameter,
Then slept gratified.
Felled to the ground,
Broken glasses aglow with the night’s moonlight,
Scattered, they pierce my blossom,
But that might be the night of “Maupassant”,
When broken glass is sweeter than real life.
I watch the bird come home to sleep,
Which beautifully and systematically
Sews and weaves in its song, composition and structure.
I fear the night will be falling,
By solitarily watching
A river, and
From the experiences, I prepare
To write poem in one day,
And start withasentence of poem
Slash-and-burn farms are blossoming with
Rough flowers and
Brightly bold, but in the dark.
When the breeze whirls in the forest,
The sound of the barking deer cries out in the forest and
Vibrates and bursts in the rock-cracks.
That makes it night again, awake and tremor.
Frequently, the dried leaves fall to the ground,
Seemed long on their duty.
I saw “Democracy Daw Ma Kyi”
I also saw an ownerless
Smoked sesame seed collection.
Sir Eijoe’s “Haunting Evening”.
I climbed onto the hearts on fire
What for me isagolden fish,
For them is Inferno’s dungeon.
Oh! Don-tha-mi river,
I know you pick up and place Zagawar flowers
I know you areaprincess of
A new history-loving King Salween.
I know you are twin-sister of theirs
As long as the world exists.
I know your river-banks and valleys are
The graveyards of deceased grandpas and grandmas.
I know crushed human bones and bombs are embedded
In your shoulders and on your slopes.
I know, the Kyone-Sein forest-reserve is the place,
Likeathousand-and-one nights’ stories,
Where evil is defeated and
Where the immoral era will be terminated and
Where the first step to the future can start and
Where flowers will blossom.
I know where there is the whole poem.
Really, I know
The whole Hut-tha-like village track isapoem.
The cry of Ma Yea Thu,
A village girl from Pha-lam Taung, isapoem.
Upon the Ka-maw-ka-seng range isapoem.
The sunbeam upon the boats
In the lower part of Salween River isapoem.
The village head-mistress Daw Saw Myaing,
Who was slapped by the military soldiers isapoem.
The village-track hidden in the forest isapoem.
The cracking-bell in the campus of
Pha-lan-taung village school isapoem.
The tree located at the up front of Kyone-Sein village,
The shrine of the spirits on that tree,
And the paddy fields seeing through the Naw-Aw-Lar village are
All poems for me.
Hey! Maung Lwan Ni ,
Shall you ask them again,
“Who can deny these events?”.
Temporarily in Tha-ton District, Karen State.
Translator’s Note: The poet wasajournalist foraresistance radio program of the Burmese opposition, the Democratic of Voice of Burma (DVB) from 1992-1994 and he traveled extensively to the war-torn frontier areas in the Karen State to collect news regarding human rights abuses committed by the Burmese army. He was told many miserable stories by the villagers living in the area. Though he was traveling asajournalist, his poetic instinct was awakened by the beauty of nature and by witnessing the life-and-death struggles of villagers who he met during the trips.
A kind of singing bird, Eudynamys scolopacea.
The Salween is one of the main flee-lowing rivers of Burma and the author frequently uses the river asasymbol of resistance, since most of the ethnic and democracy resistance groups are based along the banks and valleys of the Salween.
Pierre Charles Baudelaire (1821-1867) wasafamous French modern poet and the author quotes from the famous poem of his, “The flower of Evil” published in (1857-1861).
The poet wants to refer the classic prophetic novel of Jules Verne, "From the Earth to the Moon" (1865),astory which depictsamachine which travels to the moon. The story was writtenacentury before the flights of the astronauts.
Sarong, worn by Burmese men and women.
Inn is Burmese name of broad-based tall timber tree yielding reddish, resinous wood. Botanical name: Dipterocarpus tuberculatus. People collect leaves of Inn tree for constructing thatched roofs, packing, and other purposes.
The poet quotes fromapoem of the Russian Poet Vladimir Mayakovsky, namely “Cloud in Pants”. Mayakovsky wrote “Look out with your boots, Messrs, firemen,
hearts on fire should be handled with caresses!”
Champac, magnolia, Michelia champaca.
Posted by ငြိမ်းဝေ at 8:52 PM No comments: Links to this post
Labels: ခရီးသွားကဗျာရှည်, နိုင်ငံတကာကဗျာ မိတ်ဆက်
တံခါးနှစ်ချပ်ကို တွန်းဖွင့်ခဲ့ကြတဲ့ ကဗျာဆရာနှစ်ဦး
လူ့ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းမှာ “မီး”ကို လူတွေစတင်တီထွင် အသုံးပြုနိုင်လိုက်တဲ့ စမ်းသပ်တီထွင်မှု ဟာ အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်၊ ကမ္ဘာဦးလူသားတဦး ကျောက်တုံးနှစ်ခုကြားမှာ သစ်ရွက်ခြောက်ကို ညှပ်ပြီး ပွတ်ကြည့်ခတ်ကြည့်ရာက“ မီး”ကို စတင် တီထွင်ဖန်တီးယူလို့ ရလိုက်တဲ့အခါ လူ့ ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းကြီးဟာလည်း အသစ်ဖြစ်ထွန်းမှုကြီး ဖြစ်လာပြီး ယဉ်ကျေးမှုရေချိန်ဟာ မြင့်တက်လာခဲ့ရပါတယ်၊ သမ်ိုင်းအချိုးအကွေ့ ကြီးတခု ဖြစ်ထွန်း ခဲ့ရတယ်လို့ လည်းဆိုကြပါတယ်။ ဒါကို ဥပမာတင်စားပြီးပြောရရင်----အဲဒီ ”မီး”ကိုစတင်တီထွင်စမ်း သပ်လိုက်တဲ့ ကမ္ဘာဦးလူသားဆိုတာ အဲဒီခေတ် အဲဒီအခါအရ တကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့ သိပ္ပံပညာ ရှင်ကြီးသဘောပါပဲ။ ဒီကမ္ဘာဦး သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးဟာ လူသားယဉ်ကျေးမှုကြီး ပိုမိုမြင့်မားတိုးတက် စေဖို့ပိတ်ထားတဲ့တံခါးကို လက်နဲ့ တွန်းဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ သဘောဖြစ်တယ်လို့ဥပမာတင်စားပြီး ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုပါပဲ------။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း(၁၀၀)ကျော်၊ ၁၉၀၄ခုနှစ်အတွင်းတုန်းက ” ဂျိန်းလှကျော်” အမည်ရတဲ့ စာရေးဆရာကြီး တဦးဟာ ”မောင်ရင်မောင်၊ မမယ်မ”လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ၀တ္ထု တပုဒ်ကို ရေးပါတယ်။ ဒီဝတ္ထုဟာ မြန်မာ့ စာပေသမိုင်းမှာ ”၀တ္ထု”အမျိုးအစား အနေနဲ့ပထမဆုံး ပေါ်ထွက်လာတဲ့ အသစ်တီထွင်မှုတခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရပါတယ်။ စာရေးဆရာကြီး”ဂျိန်းလှ ကျော်”ဟာ မြန်မာ့စာပေသမိုင်းမှာ မရှိသေး၊ မပေါ်ပေါက်ဖူးသေးတဲ့ စာပေပုံသဏ္ဍန်သစ် တခု၊ ”၀တ္ထု”ကိုစတင်တီထွင် အသုံးပြုလိုက်တဲ့သဘောပါ ပဲ၊ တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင် စာရေး ဆရာကြီး” ဂျိန်းလှကျော်”ဟာ၊ မြန်မာစာပေသမိုင်းရဲ့ ပိတ်ထား တဲ့ တံခါးတချပ်ကို ပွင့်အောင်တွန်း ဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့ စာပေပညာရှင်ကြီး တဦးအနေနဲ့ကျနော်တို့ တတွေ လေးစားကြရမှာပါ။
မြန်မာစာပေသမိုင်းမှာလည်း၊ ဆရာကြီး ”ဂျိန်းလှကျော်”လို၊ စာပေတံခါးဖွင့်ပေးခဲ့ကြတဲ့ ကဗျာဆရာနှစ်ဦးရှိပါတယ်၊ သူတို့ နှစ်ဦးရဲ့ ကျေးဇူးဟာလည်းမသေးလှပါဘူး၊ သူတို့ နှစ်ဦးရဲ့ ကျေးဇူး ကြောင့်ပဲ မြန်မာကဗျာ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဟာ အဆင့်တဆင့်စီ တိုးတက်မြင့်မားကျယ်ပြန့် လာခဲ့ ကြ ရတယ်လို့ အသေအချာပြောနိုင်ပါတယ်၊ အဲဒီကဗျာဆရာကြီးနှစ်ဦးကတော့ ကဗျာဆရာကြီး ”ဇော်ဂျီ” နဲ့ ကဗျာဆရာ” မောင်လေးအောင်”တို့ ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။
စာပေချစ်သူများ သိရှိထားကြပြီး ဖြစ်တဲ့အတိုင်း လွတ်လပ်ရေးအကြိုခေတ် ၁၉၃၀--ခုနှစ်လွန် တ၀ိုက်က ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ ”ခေတ်စမ်းစာပေခေတ်” ဆိုတာ၊ မြန်မာစာပေသမိုင်းမှာ အထင်ကရ မှတ်တိုင်တခုပါ။ ဒီ”ခေတ်စမ်းစာပေခေတ်”မှာ ထူးခြားချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ စကားပြေနဲ့ကဗျာ နှစ်မျိုးနှစ်စားစလုံး။ အသစ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ဖြစ် ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဆရာ ”ဇော်ဂျီ”ဟာ ”ကဗျာအသစ်ဖြစ်ထွန်းမှု”ကို တီထွင်ခေါင်းဆောင်တဲ့ သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာ ”ဇော်ဂျီ”ဟာ၊ ခေတ်စမ်းကဗျာအမျိုးအစားသစ်ကို ပထမဆုံးစမ်းသပ်တီထွင်ခဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်၊ မြန်မာကဗျာသမိုင်းကို သည့်ထက်ပိုမိုမြင့်မားတိုးတက်ကျယ်ပြန့် စေဖို့ဆရာ”ဇော်ဂျီ” က၊ ပိတ်ထား တဲ့တံခါးတချပ်ကို အောင်မြင်စွာ တွန်းဖွင့်ပေးလိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
၁၉၂၈--ခုနှစ် “ဟံသာကြေးမုံ“ စာစောင်မှာ”ပိတောက်ပန်း”လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ကဗျာ တပုဒ်ပါရှိ လာပါတယ်။ ရေးဖွဲ့ သူ ကဗျာဆရာက ဆရာ ”ဇော်ဂျီ” ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကဗျာကို ဖော်ပြ လိုက်တော့ မြန်မာကဗျာနယ်ပယ်မှာ ”ဂယက်”တော်တော်ရိုက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စည်းကမ်း ကလနားကြီးလှတဲ့ ကဗျာဆရာကြီးတွေကြားမှာ ဗုံးတလုံးခွဲလိုက်သလို ဖြစ်ပြီး ၀ိုင်းဝန်းဝေဖန် ပစ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်၊ တချို့ ကဆိုရင်‘ ပိတောက်ပန်း‘ ကဗျာကို ”ကဗျာ”မဟုတ်ဘူးလို့ တောင်မှ ရှုံ့ချခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါ တယ်။” ပိတောက်ပန်း”ကဗျုာဟာ မြန်မာကဗျာအဆင့်အတန်းကို နိမ့်ကျ အောင်လုပ်တာဆိုတဲ့ အထိ စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုအုပ်အော်သောင်းနင်း ဖြစ်ရလောက် အောင် ”ပိတောက်ပန်း”ကဗျာဟာ သူနဲ့ခေတ်ပြိုင်ကဗျာတွေထဲမှာ တကယ့်ကို ထူးခြားကွဲပြား နေတာကလည်း အထင်အရှားပါပဲ။
ဆရာဇော်ဂျီရဲ ”့ပိတောက်ပန်းကဗျာ”ကို ဖတ်ကြည့်ရအောင်ပါ၊
ပွင့်ငုံက်ို လင့်ကုန်ကြတော့လို့့
ခေါင်းကြွကာ ဆာဝေေ၀နဲ့ 
တီတာတာ ပွင့်ရွှေဖူးငယ်တို့ 
သူတို့ လို ဘယ်သူမြူးနိုင်ပါ့
သာသနာ ရွှင်ရွှင်လန်းအောင်လို့ 
နှစ်ဆုံးကုန် အတာဝင်သို့ 
”ပိတောက်ပန်း” ကဗျာနဲ့ သူ့ အထက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့ ကဗျာက်ို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပြီးဖတ်ကြည့် ရင်ပဲ ကဗျာနှစ်ပုဒ်ရဲ့ကွာဟချက်ဟာ ဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာ ချက်ချင်းသိနိုင်ပါတယ်။ စည်းကမ်းကလနားကြီးမားလှတဲ့၊ တနည်းအားဖြင့် ဂန္တ၀င်ဆန်သထက်ဆန်အောင် ရေးရဖွဲ့ ရတဲ့ ဟန်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်၊ ပွင့်လင်းလန်းဆန်းတဲ့ ရေးဟန်ဆိုပြီး ”ရေးဟန်” နှစ်ခုအပေါ် စာဖတ်သူ က သတိမပြုမိပဲ မနေနိုင်လောက်အောင်သိသာလှတာ တွေ့ ကြရပါတယ်။
”ပိတောက်ပန်း”ကဗျာမှာ ”မခူးချင်းစမ်းပါနဲ့ ”ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းဟာ၊ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ကဗျာတွေထဲမှာ ”စာဆန်သထက်ဆန်အောင်” ”အိနြေ္ဒကြီးသထက်ကြီးအောင်” ရေးမှဖွဲ့ ကဗျာ ပီသ တယ်၊ ကဗျာကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ကဗျာဆရာတွေကြားမှာ ဗုံးတလုံးချခွဲလိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ တဲ့ ”အသုံးအနှုန်း”ဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စကားအရပြောရရင် ”စကားပြောလေသံ၊ အရပ်သုံးစကား”ကို ကဗျာထဲမှာ ထည့်ပြီးဖွဲ့ လိုက်တာပါ၊ လူတွေအရပ်ထဲမှာ နေ့ စဉ်သုံးနှုန်းပြောဆိုနေတဲ့ စကားလုံးတွေ ကို ကဗျာမှာထည့် ပြီးဖွဲ့ လိုက်တာပါ။ ဖွဲ့ တာမှ ကဗျာရဲ့ အဖွင့်စာကြောင်း၊ အဖွင့်ပါဒမှာကတည်းက အခုလို ဖွဲ့ လိုက်တာပါ၊ ဒီလိုသုံးနှုန်းဖွဲ့ ဆိုလိုက်လို့ လည်း ခေတ်ပြိုင်ကဗျာဆရာတွေ ဟာ ”မျက် ကလူးဆန်ပြာ” ဖြစ်ကုန်ကြရပြီး ”ပိတောက်ပန်းကဗျာ” ကို ”ကဗျာမှ ဟုတ်ရဲ့ လား” ဆိုတဲ့ မေးခွန်း တွေမေးခဲ့ကြတာပေါ့။
”ပိတောက်ပန်းကဗျာ”ဟာ အချိုးကဗျာပဲဖြစ်ပါတယ်၊ လေးချိုးကဗျာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကဗျာထဲမှာ ထည့်သွင်းရေးဖွဲ့ တဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့တချို့ စကားလုံးတွေကို ခေတ်ပြိုင်ကဗျာ သ ဘောတရား၊ ကဗျာဥပဒေသတွေထဲက ခွဲထွက်ပြီး ကဗျာသစ်သဘောတရား၊ ကဗျာသစ်ဥပဒေသ တခု ဖြစ်လာရလောက်အောင် တီထွင်နိုင်ခဲ့တဲ့ သဘောရှိပါတယ်၊ အကြောင်းအရာအားဖြင့်ဆိုရင်
” ပိတောက်ပန်း”ကို အသက်ရှိတဲ့ လူနဲ့ တထပ်တည်းသဘောထားပြီး ရေးဖွဲ့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ကိစ္စ ဟာ ဒီတုန်းက ”ပိတောက်ပန်း”ကို ”ပန်းတကာတို့ ရဲ့ ဘုရင်”ဖြစ်တယ်ဆိုတာလောက်နဲ့ရပ်နေခဲ့တဲ့ ကဗျာ့ပရိယာယ်ကို ချဲ့ ထွင်တိုးမြှုင့် လိုက်တဲ့ သဘောဖြစ်ခဲ့ပါ တယ်၊ ”သူလည်းလေလောကီသား ပေမို ”့ ဆိုတဲ့ စကားစုဟာ၊ ပိတောက်ပန်းကို လူနဲ့ ထပ်တူပြုလိုက်တဲ့ စကားစုပါပဲ။ ပိတောက်ပန်း တွေကို လူတွေက အရမ်းကာရော ခူးကြ၊ ပန်ကြ၊ ချွေချကြ လုပ်ကြတဲ့အခါ ”ပိတောက်ပန်း”အပေါ် စာနာစိတ်ဖြစ်ပြီး ”မခူးချင်စမ်းပါနဲ့ လို့ ”ဟန့် တားလိုက်ရုံတင်မက ”သူလည်းလေလောကီသားလိုပါ့ ကြွားချင်လှပေလိမ့်မယ်”ဆိုတဲ့စကားနဲ့ ၊ ”ပိတောက်ပန်းဟာလည်း သူ့ အလှနဲ့ သူဘ၀နဲ့ ပိတောက် ပင် ပေါ်မှာ လှချင်ပချင်ရှာမှာပေါ့ ” ဆိုတဲ့ စေတနာနဲ့ ဒီကဗျာကို ရေးဖွဲ့ လိုက်တာပါ။ ထီးနန်း ဟန်ဆန်တဲ့ ကဗျာတွေ၊ ဘုန်တော်ဘွဲ့ တွေ၊ အလှဘွဲ့ တွေ၊ သဘာဝအဖွဲ့ အနွဲ့ တွေကြားမှာ မျက်စေ့လည်နေကြတဲ့အချိန်၊ ”သာမန်အရာဝတ္ထု၊ သာမန်ကိစ္စ”များသာဖြစ်တယ်လို့ လူတွေယူဆ ထားကြတဲ့ ၀တ္ထုပစ္စည်းတွေ၊ ကိစ္စတွေကို ဆရာဇော်ဂျီက ကဗျာထဲမှာထည့်ပြီး ဖွဲ့ လိုက်တဲ့အချက် ဟာ ထူးခြားတဲ့အချက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်၊ နောင်အခါမှာ ဆရာဇော်ဂျီဟာ ”ကြောင်မနက်ပြာ” ”လှိုင်း ကလေးအသင်” အစရှိတဲ့ ကဗျာမျိုးတွေကို ဆက်ပြီးဖွဲ့ ဆိုလာရင်းက၊ ဒီအယူအဆဟာ ပိုပြီးထိ ရောက်ကျယ်ပြန့် လာခဲ့ပြီး လူတွေလက်ခံသဘောကျလာခဲ့ကြပါတယ်၊ ဒီလိုနဲ့ ပဲ ဆရာဇော်ဂျီ ဟာ ”ပိတောက်ပန်း” ကဗျာတပုဒ်ထဲနဲ့ ၊ ခေတ်စမ်းကဗျာခေတ်ရဲ့ တံခါးကို တွန်းဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်၊
မြန်မာကဗျာနယ်ပယ်မှာ ၊ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တ၀ိုက်ဟာ ထူးခြားတဲ့ နှစ်ကာလတခုပါပဲ။ အဲ့ ဒီနှစ်တ၀ိုက်က ”မိုးဝေစာပေမဂ္ဂဇင်း” မှာ ဖော်ပြတဲ့ ကဗျာတွေဟာ၊ သူနဲ့ ခေတ်ပြိုင်တခြားဘယ်မဂ္ဂ ဇင်းတွေနဲ့ မှ မတူတဲ့ ”ကဗျာသစ်” တွေဖြစ်နေတာ တွေ့ ရပါတယ်။
၁၉၇၀-ခုနှစ်တ၀ိုက်၊ မိုးဝေစာပေမဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြနေတဲ့ ကဗျာတွေရဲ့ ထူးခြားချက်က ကဗျာ အတတ်ပညာအရ၊ အကြောင်းအရာအရ ထူးခြားသစ်လွင်တဲ့အတွက် နောင်နှစ်(၂၀)ကျော်လာတဲ့ အခါ အဲ့ဒီ ၁၉၇၀-ခုနှစ်တ၀ိုက်က ပေါ်ခဲ့တဲ့ မိုးဝေစာပေမဂ္ဂဇင်း ကဗျာတွေကို ”မိုးဝေကဗျာ ခေတ် ကဗျာများ” ရယ်လို့ ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုလာနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
မိုးဝေစာပေမဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြနေတဲ့ ကဗျာတွေမှာ အထင်ရှားဆုံးအချက်က ”လေးလုံးတပါဒ စနစ်ကိုဖြေလျှော့ပြီး၊ ပါဒတခုမှာ စကားလုံးအရေအတွက် ကြိုက်သလိုထားရှိခြင်းနဲ့ ၊ လွတ်လပ်ကာ ရန်စနစ်ကို ကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်”အရပ်သုံးစကား၊လူထုသုံးဝေါဟာရနဲ့ စကားပြောရစ် သမ် ” ကိုစတင်အသုံးပြုတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကဗျာအတတ်ပညာပိုင်းဖြစ်ပြီး အကြာင်း အရာပိုင်းမှာကြတော့ခေတ်ပြိူင်လူထုရင်ခုန်သံကို ဦးစားပေးရေးစပ်ခဲ့ ကြတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ လိုအတတ်ပညာအရ၊ အကြောင်းအရာအရ နှစ်ခုစလုံး“ အသစ်“တီထွင်ရေးစပ်တဲ့ကဗျာလှုပ်ရှား မူမှာ ကဗျာဆရာ“ မောင်လေးအောင်“ ဟာ တပ်ဦးကရပ်ခဲ့ ပါတယ်။ သူ့ ရဲ့ ကျော်ကြားလှတဲ့ ကဗျာတ ပုဒ်ဖြစ်တဲ့“ဒီဇင်ဘာ(၂၀)ရက်`၏တမ်းတခြင်းသို့မဟုတ်ရဲဘော်ရဲ့ကဗျာ “ကဗျာဟာ၊နောင်အခါ“ မိုးဝေကဗျာခေတ်“ ရယ်လို့ခေါ်ဝေါ်သတ်မှတ်ခံရမယ့် ၊ ကဗျာခေတ် တခေတ်ရဲ့ တံခါးကို တွန်းဖွင့်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကဗျာတပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကဗျာကို ၁၉၆၉ ခု၊ ဒီဇင်ဘာ လ ထုတ်၊မိုးဝေစာပေ မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြခဲ့တာပါ၊ ခုဆိုရင် နှစ်ပေါင်း(၄၀နီးပါး)ရှိခဲ့ ပါပြီ။ လေးလုံး တပါဒစနစ်ကို ဖြေလျော့ ပြီး လွတ်လပ်ကာရံစနစ်ကိုကျင့်သုံးကာ စကားပြောရစ်သမ်ကို အပီပြင်ဆုံး၊ အစောဆုံးရေးစပ်နိုင်ခဲ့ တဲ့ ကဗျာအဖြစ်အခုလို တွေ့ ရပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်`၏ တမ်းတခြင်း သို့ မဟုတ် ရဲဘော်ရဲ့ ကဗျာ
ရဲဘော်ရဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို တွေ့ ရမယ်။
စီးဆင်းခဲ့တဲ့ ရဲဘော်ရဲ့ သွေးတွေအကြောင်း။
အာဇာနည် ရာထောင်သောင်းတို့ နှင့်အတူ
ရဲဘော်ရဲ့ သွေးဟာ နီရဲခဲ့တယ်
သူတို့် က ရဲဘော်ရဲ့ ဂုဏ်အထူးထူးကို
ရဲဘော်က စိမ်းကားတဲ့အပြုံးနဲ့ 
တို့ ဟာ စာရွက်တွေဝေဖူးတယ်။
သူရသတ္တိမဲ့တဲ့ ရှိုက်သံနဲ့ 
ဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးပမ်းတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်။
စေးထန်းတဲ့ သွေးစက်တွေရယ် ဘယ်သူ့ သွေးလဲ
မခြောက်သေးတဲ့ သွေးအစက်စက်နဲ့ 
ရဲရဲ လက်လက် သီယှက်ထားတဲ့
ရဲဘော်ရဲ့ ကဗျာပါလား။ ။
လူ့ ယဉ်ကျေးမှုနယ်ပယ်မှာ၊ စာပေခေတ်အသီးသီးရဲ့ တံခါးတွေကို တွန်းဖွင့်ပြီး စာပေ ခေတ်သစ်တခု ထူထောင်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းတီထွင်ခဲ့ကြတဲ့ စာပေပညာရှင်တွေဟာ ၊ဘာနဲ့ တူ သလဲဆိုတော့ ကမ္ဘာဦးက မီးကိုစတင်ဖော်ထုတ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာဦးသိပ်ပံပညာရှင်လူသားနဲ့တူ ကြတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ လူ့ ယဉ်ကျေးမှုနယ်ပယ်မှာ အခုလို ခေတ်အသီးသီးရဲ့ တံခါးကို ပွင့်သွား အောင်တွန်းဖွင့်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ပညာရှင်များအပေါ် ကျနော်တို့ တတွေ လေးနက်ကြရမှာပါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ငြိမ်းဝေ at 12:09 AM No comments: Links to this post
Posted by ငြိမ်းဝေ at 11:56 PM No comments: Links to this post
Posted by ငြိမ်းဝေ at 10:15 PM No comments: Links to this post